လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်လောက်က မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ထောင်ကျခဲ့ဖူးသူ ဦးပြေသိမ်းကို ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ခန့်အပ်ခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စဟာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်ဘူးဆိုပြီး (၁၂) ရပ်ကွက်အတွင်းက လူ ၆ဝ ကျော် လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ပြည်ထဲရေးဌာနကို ကန့်ကွက်စာ တင်ခဲ့သလို တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ကိုလည်း မိတ္တူ ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရာဇဝတ်မှု ကျူးလွန်ခဲ့သူကို ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ခန့်အပ်တာဟာ အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်တဲ့အတွက် သူ့အနေနဲ့ လွှတ်တော်အတွင်းကိုတင်ပြပြီး ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ ဦးဖုန်မြင့်အောင် က RFA ကို ပြောပါတယ် ။
“တယောက်နဲ့ တယောက် အကြောင်းသိတွေ ဆိုတော့ သူတို့က ရက်စွဲနဲ့ အမှုအတိအကျနဲ့၊ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှု ပေါ့ဗျာ စာနဲ့ပေနဲ့ ရေးတာကိုး။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရေးတာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲမှာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ထောင်ထွက် မဟုတ်ရဘူးဆိုတာ ပါတာပေါ့။ ကျနော့်အနေနဲ့ လွှတ်တော်မှာ ပြောရတော့မှာပေါ့ဗျာ”
တောင်ဥက္ကလာပ မြို့နယ် အပါအဝင် ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ် အများစုမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်က ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အတော်များများကို အသစ်ပြောင်းလဲ ခန့်အပ်ခဲ့ရာမှာ အားလုံးဟာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင်တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အရင် စစ်အစိုးရလက်ထက် ရပ်ကွက်နဲ့ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေမှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင် မဟုတ်သူတွေလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
Even though Rules/Regulations are clearely stipulated, Authority just CLOSED BOTH EYES/ACT AS BLINDS. The Lawlessness is Ruling.
Jul 09, 2011 08:39 PM